Rabshado sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta hareeyey Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Debadbaxyo isu badelay rabshado, loogana soo horjeeday dhismaha maamulka 3-da gobol oo maanta ka dhacay xarunta gobolka Bay ee Baydhabo ayaa sababay dhimashada laba qof iyo dhaawaca in ka badan 10-qof oo kale, kuwaasoo dhammaantood ahaa shacab dibadbax looga soo horjeedo dhismaha maamulka saddexda gobol ee Koonfur-galbeed Soomaaliya.
Ninka sheegta madaxweynaha Maamulka Lixda Gobol ee Koofur Galbeed Madoobe Nuunow Maxamed ayaa ku eedeeyay Ciidamada dowladda inay soo weerareen shacabka banaan bax nabadeed sameynayay, isla markaan rasaas lagu furay.
“Waxaan u aragnaa duulaan lagu soo qaaday dowladda aan Madaxweynaha ka ahay ee Koofur galbeed, shacabka wuxuu go’aansaday in fikirkiisa si xoriyad leh ku jirta u gaarsiiyo caalamka, waana banaan bax nabadeed oo ay dhigayeen, markaas kadib waxaa rasaas nagu soo furay ciidankii Qaranka”ayuu yiri Madoobe Nuunow.
Madoobe Nuunow ayaa sheegay in dadkii banaan baxayay la jirdilay, la dhaawacay, qaarna xabsiyada la dhigay, isagoo intaa ku daray in xaruntooda ADC lagu soo weeraray, isla markaana ilaaladooda hubka laga dhigay.
Sidoo kale, Nuunow ayaa xusay in weerarka uu yahay mid lagu soo qaaday maamulkiisa, isagoo madaxda dowladda ku eedeeyay inay wadaan sidii ay isaga horkeeni lahaayeen shacabka gobollada Koonfur-galbeed ku nool.
Debadbaxyada ka dhacay Badhabo ayaa yimid xilli uu manta halkaas tegay madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh, kaasoo si rasmi ah u furay shirka lagu dhisayo maamulka saddexda gobolka ee Koonfurta Soomaaliya.
Dowlada Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo ka wada hadlay xakameynta dhoofka dhuxusha